डेराबासी कलाकार : पल शाह देखि बेनिसा हमालसम्म डेरामै बस्छन् ! – Sagarmatha Online News Portal
डेराबासी कलाकार : पल शाह देखि बेनिसा हमालसम्म डेरामै बस्छन् !
काठमाडौं । सेलिब्रिटी भन्नेबित्तिकै भव्य घर, गाडी, हाई–फाई जीवनशैली हुने धेरैले ठान्छन् । तर, केही नेपाली सेलिब्रिटी डेरा जीवन बिताइरहेका छन् ।
सन् २०१२ देखि कलाकारितामा सक्रिय छन, पल शाह । मोडलिङबाट अभिनयमा प्रवेश गरेका उनी १० वर्षअघि दाङबाट काठमाडौँ आएका हुन् । त्यहाँदेखि अहिलेसम्म उनी डेराजीवन बिताइरहेका छन् । यस अवधिमा आफूले पाँच ठाउँमा कोठा सरेको उनी बताउँछन् । दुई वर्षयता उनी काठमाडौँ, नयाँ बानेश्वरको शान्तिनगरमा फ्ल्याट लिएर बसेका छन् । ‘फ्ल्याटमा सर्नुअघि एउटा कोठा लिएर बस्थेँ,’ उनी भन्छन् । डेरामा बस्दा आफूलाई आनन्द लाग्ने पल बताउँछन् । ‘बत्ती, पानी, घरको रेखदेख कुनै टेन्सन हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘भाडा दियो, सकियो ।’ तर, डेरामा कहिलेकाहीँ आफूले भनेजस्तो नहुने उनी बताउँछन् । ‘समयमा भाडा तिरेन भने, राति अबेर भएमा, साथीहरू कोठामा आए घरबेटी कराइहाल्छन्,’ उनी सुनाउँछन, ‘त्यतिखेर चाहिँ आफ्नै घर ठीक होजस्तो लाग्छ ।’ काठमाडौँ छिरेपछि ३५ सयदेखि आठ हजारसम्म एउटा कोठाको भाडा तिरेको उनी बताउँछन् । अहिले ‘फ्ल्याटको भाडा १७ हजार तिर्छु,’ उनी भन्छन् ।
रंगमञ्च हुँदै फिल्मतिर लागेकी अभिनेत्री हुन, मेनुका प्रधान । नवलपरासी, गैँडाकोटकी मेनुका बौद्धस्थित सिमलटारमा डेरामा बस्दै आएकी छिन् । उनी काठमाडौँ आएको १० वर्ष भयो, यति नै समय डेरामा बसेको भयो । ‘१० वर्षमा छ ठाउँ कोठा सरिसकेँ,’ उनी भन्छिन, ‘तीन वर्षदेखि चाहिँ बौद्धमै छु ।’
प्लस टूपछिको पढाइ र करिअरका लागि राजधानी भित्रिएकी हुन, अभिनेत्री बेनिशा हमाल । थुप्रै म्युजिक भिडियोमा काम गरेकी उनीसँग पनि डेरा जीवनको अनुभव छ । चितवन घर भएकी बेनिशा अहिले अपार्टमेन्टमा बस्छिन् । ‘डेरामा पाँच वर्षजति बसेँ,’ उनी भन्छिन, ‘सुटिङबाट राति ढिला फर्किंदा, कोठामा आफन्त र साथी आउँदा घरबेटीले किचकिच गर्थे । कोठामा अलि धेरै मान्छे आए भने वा सुटिङबाट राति अबेर फर्कियो भने भोलिपल्ट घरबेटीले खाउँलाझँै गरेर हेर्थे । दुई वर्षअघि अपार्टमेन्ट किनेर यतै सरेँ ।’
अभिनेता कामेश्वर चौरसिया पर्साबाट काठमाडौँ छिरेको २० वर्षभन्दा बढी भयो । ‘अझै डेराको जिन्दगी छ,’ उनी भन्छन् । अहिले उनी काठमाडौँ, पेप्सीकोलामा श्रीमती र छोरासँग फ्ल्याटमा बस्छन् । काठमाडौँमा भाडामा बस्नुका थुप्रै अनुभव उनले बटुलेका छन् । ‘कसैले अनुहार हेरेरै कोठा छैन भन्थे,’ उनी सम्झिन्छन, ‘कोही अविवाहितलाई कोठा दिन्नँ भन्दै फर्काइदिन्थे । काठमाडौँमा कोठा पाउनै गाह्रो । त्योभन्दा झन् गाह्रो कोठा पाएपछि घरबेटीको किचकिच सहन । कतै पानीको समस्या, कतै घरबेटीको कचकच, कतिपयले त कलाकार भनेपछि राख्नै नमान्ने !’
गायक यश कुमार २०५२ सालदेखि डेरामा बस्दै आएका छन् । अहिलेसम्म उनले दुई ठाउँ मात्र डेरा सरेका छन् । अहिले उनी काठमाडौँ, ज्ञानेश्वरमा फ्ल्याटमा बस्छन् । ‘डेरामा बस्नु मेरो बाध्यता हो,’ उनी भन्छन्, ‘रिङरोडभित्र घर बनाउन रहर छैन । गाउँघर र शान्त वातावरण मन पराउँछु । काठमाडौँमा यस्तो ठाउँ कहाँ पाउनु ? त्यसैले डेरामा बस्छु ।’ सम्पूर्ण साप्ताहिकबाट ।
Published On: २८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार